Fitaovana jiro, jiro Edison, jiro tady - Omita Lightig
Avelao ny momba ny asa aman-draharaha sy ny tombotsoan'ny jiro ho anao.
Toeram-pandraharahana momba ny fitokisana, fototra iorenan'ny fahatokisana.
Omita Lightig miaraka amin'ny voasoratra anarana dia nahita RMB 20 tapitrisa tapitrisa hita tamin'ny taona 2009. Amin'ny maha-mpamorona, mpanamboatra ary mpanondrana jiro haingon-trano haingon-trano sy jiro Edison, ny vokatra sy serivisinay dia nankatoavin'ny mpanjifa erak'izao tontolo izao. Manana tranokely roa izahay izay misy ao amin'ny Tanànan'i Dongguan miaraka amina sehatr'asa 6000M2 Factory, 2000M2 Warehourse ary 400M2 Showroom. Manana ekipa matihanina koa izahay amin'ny famolavolana, famokarana ary fanaraha-maso QC, ary ekipa Marketing sy varotra. Ny vokatra sy serivisinay dia nitatra tamin'ny firenena 27 mahery, Europea ary Etazonia ho tsena lehibe, na izany aza dia manana orinasa any amin'ireo firenena an-dàlam-pandrosoana haingam-pandeha toa an'i Brezila, Chile ary Afrika atsimo, Nizeria, Malezia isika. Ny ankamaroan'ny vokatray dia CE Rohs voamarina, ary azo antoka fa manana UL sy SAA ihany koa.
Jiro sy vaovao namboarina
Makà aingam-panahy avy amin'ny zavatra asehonay eto
Jiro kristaly mitsivalana mitsivalana-Fr ...
Jiro Pendant Linear miaraka amin'ny S14 ...
Miverina amin'ny jiro Edison voalohany ...
White jiro matte fotsy sy ...
Te-handinika bebe kokoa momba anay na momba ny vokatra products ve ianao?